वामदेवको टुङ्गो लगाउन ओली र प्रचण्ड आजै पटक-पटक वार्ता गर्ने !
असोज २४, २०७५ बिगुल
काठमाडौँ- काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ बाट वामदेव गौतमलाई पुन निर्वाचन गर्ने, नगर्ने भन्ने विषयमा अझै अन्योल रहेको छ। काठमाडौं क्षेत्रनम्बर ७ बाट निर्वाचित सांसद् रामवीर मानन्धरले मंगलबारनै आफू वामदेवको लागि राजिनामा दिन लागेको बताइसकेका छन्।
यस विषयमा अहिले नेकपाको पार्टी भित्र छलफलको विषय बनेको छ। पार्टी भित्रै पनि यस विषयलाई लिएर दुई पक्ष देखा परेका छन्। एक पक्ष वामदेवलाई पुन निर्वाचनबाट निर्वाचित गर्नु पर्ने बताइरहेका छन् भने अर्को पक्ष यसको विरुद्धमा रहेको बुझिएको छ।
यसै विषयमा छलफल गर्न अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता हुँदैछ । साथै अध्यक्षद्धयले वामदेवसँग पनि छुट्टाछुट्टै र संयुक्त वार्ता गर्ने बुझिएको छ।
यस्तै अहिले पार्टी भित्र यस विषयलाई लिएर विभिन्न छलफल र टिकाटिप्पणी भैरहेको छ।
प्रकाशित : बुधबार, असोज २४, २०७५१७:३५
अहिलेको सरकार पाँच वर्षै चल्छ भन्छन् प्रचण्ड !
काँग्रेस संसदीय दलको नेता चयनका लागी मतदान सुरु
को हुन् सरकारले नियुक्त गरेका सात प्रदेश प्रमुख
एमाले नेता अधिकारी अस्पतालबाट घर फिर्ता,शल्यक्रिया सफल!!
तटबन्ध निर्माणले खुशी छन्, भोटेकोशी किनारका बासिन्दा !
ओली र प्रचण्ड टसको मस नभएपछि वार्ता निष्कर्षबिहीन: केमा अड्कियो गाँठो ?